Fonjan’Antanimora : tsipaipaikan’ny mpiasa no hanofana taxibe hitondrana ireo voafonja | NewsMada
Fonjan’Antanimora : tsipaipaikan’ny mpiasa no hanofana taxibe hitondrana ireo voafonja
Par Taratra sur 03/03/2016
60 isan’andro eo ho eo ny isan’ny olona voafonja hiatrika fitsarana eny amin’ny tribonaly Anosy, araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fonjan’Antanimora, Rakotonandrianina Olivier, ny talata teo. Vokatry ny tsy fisian’ny fiarabe hitaterana ny voafonja, manofa taxi-be 119 ny mpiandraikitra ny fonja ka manao tsipaipaika ny mpiasa sy ny malala-tanana manefa ny vola hofan’ny fiara. 24 000 Ar ny hofan’ny taxi-be 119 mandroso sy miverina miainga ao Antanimora mankeny Anosy. Mila fiara telo ny fonja, arakaraka ny hamaroan’ny voafonja hotsaraina ka manodidina ny 72 000 Ar isan’andro ny vola ilaina. Indraindray manome solika ihany ny minisiteran’ny Fitsarana fa tsy maharaka ny filana izany amin’izao fotoana izao.
Rehefa vitsivitsy ny isan’ny voafonja entina eny amin’ny tribonaly, mandeha taxi-be miaraka amin’ny mpandeha tsotra izy ireo. Tranga izay miteraka fifandirana teo amin’ny mpandeha ny zotra 119. Rehefa tsy mahita taxi-be intsony ny hariva avy eny Anosy, vitaina an-tongotra ny lalana hatreny Antanimora.
Mila fiara telo ny fonjan’Antanimora satria 2 933 ny isan’ny voafonja rehetra. 140 ny mpiasa miandraikitra ny fonja raha tokony ho mpiasa iray misahana voafonja dimy, raha ny fenitra iraisam-pirenena. Ho an’ny sakafo, ankoatra ny mangahazo maina omen’ny fanjakana indroa isan’andro, misy ny ONG manampy mitondra vatsy. Omena fiofanana momba ny asa koa ny voafonja mba ho mora kokoa ny fiverenany eny anivon’ny fiarahamonina rehefa mivoaka eny.